म निदाएको छैन मोबाईलवाट भर्खरै प्राप्त खबर मेरा लागि खासै अप्रत्याशित थिएन । सरकार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने योजना गरिरहेको जानकारी मलाई जिम्मेवार ठाउँवाट प्राप्त भैसकेको थियो ।
कमरेड सुदीपले यस ठाउँको बारेमा हिजो मात्रै बाटोमा कमरेड विकलबाट धेरै कुरा सुनेको थियो । कमरेड सुदीपले टक्क उभिएर ती ठाउँहरुलाई गौर गरेर हे¥यो ।‘जनयुद्धको पूर्वाधार विकास गर्न यी स्थानहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेछ ।’ हिजो सुनेको आधारमा क. सुदीपले मनमनै मूल्यांकन ग¥यो ।कमरेड सुदीप !दुई वर्ष अघि मात्र यो पार्टीमा प्रवेश गरेको एकजना कमरेड । योभन्दा अघि लामो समयसम्म ऊ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागिरह्यो । त्रि–चन्द्र क्याम्पसमा पढिरहेको बेला प्रमाणपत्रहरु च्यातेर वि.सं. २०२८ तिर झापा आन्दोलनमा कुद्यो ऊ । त्यसपछि उसका जीवनका उर्वर समयहरु देश, जनता र मुक्तिका सपनाहरु बुन्दै बिते । छ्यालीस सालको आन्दोलनपछि उसका पार्टी संसद र सरकारमा पनि पुग्यो । कम्युनिष्ट नैतिकताभन्दा टाढा पूँजीवादी मूल्यको समेत आफ्नै पार्टीबाट विघटन गरिएका थुप्रै घटनाहरु देख्यो उसले । यिनै विचलन र विघटनका विषयहरुलाई लिएर पार्टीभित्र लामो अन्तर्संघर्ष ग¥यो । अन्ततः बाध्य भएर ऊ त्यहाँबाट बाहिरियो । उसले जनयुद्धको बाटोबाट नेपाली जनताको मुक्ति हुने सपना बोक्दै यो पार्टीमा आइपुग्यो ।